Dimitar Berbatov oo kooxdiisii hore ee Man United u tilmamay xidig ay qasab tahay in ay la saxiixdaan – Gool FM
(Manchester) 16 Feb 2019. Halyeeygii hore Manchester United Berbatov ayaa kooxdiisii hore ugu baaqay inay la soo saxiixdaan xidiga khadka dhexe ee kooxda PSG Verratti .
Verratti ayaa ka mida xidigaha ugu wanaagsan ee ka ciyaara khadka dhexe waqtigan la joogo caalamka wuxuuna kooxdiisa dhawaan ka caawiyey in ay guul ka gaarto kooxda United-ka kulan ka tirsanaa Champions League .
Berbatov ayaa aaminsan in uu xidigan uu wax badan ka caawin karo United-ka una qalmo xirishada maaliya guduudan ee ay Manchester ku ciyaarto , mar uu ka hadlayey waxa uu yiri :
“Marco Verratti waa mid cajiib ah marka uu ka ciyaarayo khadka dhexe ee PSG ” waxa sidaas yiri Berbatov.
“Maxaan jeclahay isaga waa mid mar kasta jecel in uu kubada horey u dhaqaajiyo hadii ay ku adkaatana waa mid ku faraxsan in kubada uu haayo, sidoo kale waxa uu hakiyaa weerarada kooxdiisa lagu soo qaadayo”.
“Verratti waa ciyaaryahan aan la rumeysan karin; Waxa uu i xusuusinayaa Xavi iyo Iniesta, waxaa jirta siyaabo badan oo ay isaga egyihiin .
“Wey u wanaagsanan laheed in United badal kaga dhigaan Nemanja Matic maxaa yeelay Serbianku waxa uu qabanayaa shaqo hooseysa halka Varati uu xakameyey kulankii ay la ciyaareen Manchester, laakiin uma maleenayo in PSG ay beecin doonto”
si kastaba Marco Verratti oo leh qaab ciyaareed cajiib ah, ayaa waxaa wada doonaya dhamaan kooxaha ugu tunka weyn ee ka ciyaara shanta horyaal ugu waaweyn ee Europe.